किसानका पीडा : के खाएर बाँच्ने होला ? « News24 : Premium News Channel
भजनी । जानकी गाउँपालिका–८ का लालवीरे कामीले दसँैको पछिल्लो दिन आठ कामदार लगाएर दुई बिघामा लगाएको धान कटाउनुभयो । प्रतिव्यक्ति रु ५०० का दरले उहाँले ज्याला व्यापत रु चार हजार तिर्नुप¥यो । उहाँले धान कटाए पनि भित्र्याउन भने पाउनुभएन ।
“गत वर्षको भन्दा धान राम्रो थियो । यस वर्ष उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतमा लगाएको एक दाना धान पनि भित्र्याउन पाइएन । सबै बाढीले बगायो । अब के खुवाएर परिवार पाल्ने ? आफूले के खाने ?” टीकापुर नगरपालिका–३ शङ्करपुरका लक्ष्मण बस्यालले आकाशको पानी पर्दा थोरै भए पनि आशा जीवित रहेको जनाउँदै जमरा कुलोको बाढी खेतमा पसेपछि धानको एक मुठ्ठा पनि खेतमा नबचेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले जमरा कुलोमा लगाइएको बाँधका कारण पनि शङ्करपुर क्षेत्र बढी डुबानमा परेको जनाउँदै सम्झँदा आँखा रसाउने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । “वर्षभरि खाने धान पूरै बगाएर लगिसक्यो अब हामीले के खाने ? किनेर खानसक्ने क्षमता छैन । हामी दिनभरि मजदुरी गरेर खाने मान्छे त्यसमाथिको अहिलेको महङ्गाइमा”, उहाँले भन्नुभयो, “खेत रोप्दा लागेको ऋृण पनि तिर्न सकेको छैन । कसरी ऋृण तिर्ने कसरी परिवार पाल्ने ? अहिलेको समयले निकै चुनौती दिएर गएको छ ।”
टीकापुरकै आशिष जनालाले पनि दसँैको पछिल्लो दिन तीन बिघा क्षेत्रफलको धान कामदार लगाएरै काट्नुभयो । परिवारसँग दसँैको बेला रमाइलो गरेको उहाँका लागि अर्को दिनसम्म टिकेन । कोरोनाका कारण भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने उहाँ आफ्नै गाउँमा केही गर्नुपर्छ भनेर गाउँ फर्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो र आफ्ना अन्य परिवारको सबै जग्गामा खेती सुरु गरेको पहिलो वर्षमै समयले निकै ठूलो चुनौती दिएर गएको छ । “कोरोनाले परदेशबाट लखेट्यो । स्वदेशमा बदलिँदो मौसमले लखेट्दै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब कता जाने ? कतै ठाउँ नै छैन । लागेको ऋण र परिवारलाई कसरी पाल्ने ? निकै अप्ठ्यारो मोडमा पुगिएको छ ।”